Time မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက် အပေါ် မြန်မာလူထု အမြင် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မှော်ဘီမြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ သံဃာ့ညီလာခံ တွင် အရှင်ဝီရသူ လျောက်ထားနေစဉ်။ ( ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၃)
ဒီသီတင်း ပတ်ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးမှာ မြန်မာ နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီး တစ်ပါးရဲ့ မျက်နှာကို ဘာသာရေး အကြမ်းဖက် သူတစ်ဦး အဖြစ် ဖော်ပြ လိုက်တာဟာ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူ မျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်တဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုတွေ ကို သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ပေး သ လို ဖြစ်စေမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာမှာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းက မတူ ကွဲပြားတဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဆောင်း ပါးရေးသား ဖော်ပြမှု တွေကြောင့် အုပ်စု မတူ သူတွေ ကြား အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန် သုံးသပ် မှုတွေ ရှိနေပါ တယ်။ မြန် မာ ပြည်သူ အချို့ရဲ့ သဘောထား တုန့်ပြန်ချက် တွေကို မဆုမွန်က စုစည်း တင်ပြ ပေး ထား ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ သြဇာ ကြီးမားတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ကြီးမှာ အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေက ရန်လို အကြမ်းဖက် တယ် လို့ ရေးသား ဖော်ပြချက်ဟာ ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီး တခုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ်မှာ ထိပါး စော်ကား သ လို ဖြစ်စေတဲ့ အတွက် သူ့အနေနဲ့ ဝမ်းနည်း မိပြီးတော့ နိုင်ငံ မှာလည်း ဒီလို လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် အုပ်ချုပ် သူကနေ စ ပြည်သူအထိ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံ ပြောဆို သင့် တယ် လို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် က သုံးသပ် ပါ တယ်။
“ဒီလို ဖော်ပြ ခံရတဲ့ အတွက် ကျနော် အနေနဲ့ စိတ်မကောင်း ပါဘူး။ သတင်းမှာ ဖော်ပြချက် အရ ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တခုလုံးကို စော်ကား လိုက်သလိုပဲ ကျနော် အဲ့သလို ခံစားရတယ်။ ဆိုတော့ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးကြောင့်၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီး တခုက နစ်နာ ရတယ်။ ကမ္ဘာ့ ဘာသာကြီး တစ်ခုက အဝေဖန် ခံရတယ် ဆိုတဲ့ဟာက တော်တော် စိတ်မချမ်းသာ စရာပါ။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်လို့ မရအောင် ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ စည်းကမ်း ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို သွားတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံ ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေး သမားများ အကုန်လုံး ပေါ့နော်။ အကုန်လုံး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကအစ နိုင်ငံတော် အစိုးရ အဖွဲ့ လူကြီးတွေက အစ အကုန်လုံးက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင် စေတဲ့ စကားတွေကို မပြောပဲနဲ့၊ ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုပဲ တင်ပြပြောဆို ဆွေးနွေးလို့ ရှိရင်၊ ကျနော်တို့ မလိုလား အပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ နည်း သွားနိုင် ပါတယ်။ အခု လို ကမ္ဘာ့ နံမည်ကြီး ဘာသာ တခု ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဒါမျိုး ရေးထားသည် Time မဂ္ဂဇင်း တခု ပေါ်မှာ ဖော်ပြ ခံရတာဟာ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော် အတွက် နစ်နာမှု၊ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်း ဆိုင်ရာလည်း ထိခိုက် တယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည် ပါတယ်။”
Time မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးပါ ပုံစာ ရေးသားချက် နောက် သတင်း ခေါင်းစဉ် ဖော်ပြ ချက်ဟာ ပြင်းထန် လွန်းပြီးတော့ လတ်တလော ဘာသာရေး အသွင် ဆောင်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အ တွက် အခြေ အနေ တွေဟာ ပိုပြီးတော့ ဆိုးဝါး သွားစေ နိုင်တယ်လို့ ဘလော့ခ်ကာ နေဘုန်းလတ်က သုံး သပ် ပါတယ်။
“ဆောင်ပါးမှာ ခေါင်းစဉ် ကလည်း နည်းနည်း ပြင်းထန်တယ်။ ဖတ်တဲ့ သူတွေ ဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ဦးတည် ချက် လွဲသွား နိုင်တယ်။ ဦးဝီရသူပုံကို သုံးထားတယ်။ ခေါင်းစဉ် ကလည်း The Face of Buddhist Terror ဆိုပြီး တပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒီ့ အနေ အထား တခုက အခု လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ် အပျက် တွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာအောင်၊ အရှိန် အဟုန် ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာအောင် သူက သွေးထိုးတဲ့ ပုံစံမျိုး အဲ့ လိုမျိုး ဖြစ်နေ တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဖြန်ဖြေတဲ့ သဘော တရားတွေပဲ ရေးသင့်တဲ့ အချိန်မှာ အဲ့လိုမျိုး တ ဘက်သတ် ရေးတဲ့ အခါကျတော့ ရေးထားတဲ့အကြောင်း အရာတွေ ကမှန်သည်ဖြစ်စေ၊ မှား သည် ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေ အပေါ်မှာ သေးငယ် သွားအောင်၊ ငြိမ်သွားအောင် လုပ် တဲ့ဟာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့၊ ပိုပြီးတော့ ဒီအဖြစ် အပျက်ကြီးက ပိုပြီးတော့ ကြီးထွား လာနိုင်တယ်။ ဒီဆောင်း ပါး ကြောင့်လေ။ Time အနေနဲ့ ကလည်း ဒီကိစ္စကို ဖွတဲ့ သဘော ပေါ့လေ။ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ခက်တာက Buddhist ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးထားတဲ့ အခါကျတော့ ဦးဝီရသူကို တိုက်ခိုက်တယ် ဆိုပေမဲ့ အားလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သဘောမျိုးတွေ မြင်လာ ပြီးတော့ တုန့်ပြန်မှု တွေကလည်း ရှိလာတဲ့ အခါ ကျတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ လက်ရှိ ဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ် အပျက်က ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာ နိုင်တာပေါ့။”
ဒီသတင်း ဆောင်းပါးကို ရေးသားသူ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ရေး လိုက်တဲ့ သတင်း ဆောင်းပါးကြောင့် ဘယ်လိုမျိုး အကျိုး သက်ရောက် မှုတွေဖြစ် သွားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်နဲ့ သတင်း သမား ကျင့်ဝတ်နဲ့ အညီ ရေးသား သင့်တယ် လို့လည်း ကိုနေဘုန်းလတ်က ထောက်ပြ ပြောဆို ပါတယ်။
တဆက် တည်းပါပဲ မန္တလေးတိုင်း မုံရွာမြို့က ဒေသခံသတင်းသမား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုတိုးကြီး က လည်း မြန် မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ဒေသ တချို့ မှာ မတည်ငြိမ် မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး တဲ့နောက် အခုလို မျိုး နိုင် ငံ တကာ သတင်း စာနယ်ဇင်း တွေရဲ့ သတင်း ဖော်ပြချက်ဟာ မီးလောင်ရာ လေပင့် သလိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေ ကို ပိုတွန်း အားပေး သလို ဖြစ်သွား နိုင်တယ်လို့ သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာ ပြည်တွင်း ထဲမှာ Crusade တွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာ Time မဂ္ဂဇင်းက ဒါကို အောက်ဆီဂျင် လုပ်ပေး လိုက်တယ် လို့ပဲ မြင်တယ်။ မီးလောင်ရာ လေပင့်တယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ ။ အဲ့တော့ ဒါတွေဟာ မလိုလား အပ်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေးကို တ စိုက် မတ်မတ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းပြီး စိတ်ရင်း စေတနာ အမှန်နဲ့ ကူညီ စောင့်ရှောက် ချင်တယ် ဆိုရင်၊ ဒီလို ပုံစံတွေ မလုပ်သင့် ပါဘူးလို့ ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။”
ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ် ဘာသာ မဆို အစွန်းရောက် သွားရင် အကျိုး ရလာဒ် မကောင်း နိုင်သလို မိမိ လုပ်ဆောင်ချက် ကောင်းအောင် စွမ်းဆောင်ဖို့ နိုင်ဖို့ကလည်း အဓိက ကျတယ် လို့လည်း နာရေး ကူညီမှု အသင်း ရန်ကုန်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူက တိုက်တွန်း ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
“ဒါကတော့ ကိုယ်ကောင်းကောင်း နေတယ် ဆိုရင် ဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်လို ဘာရေးရေးပေါ့၊ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကိုယ်ကောင်းနေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်တွေ၊ကိုယ်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာ သာတွေ ကောင်းနေ ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ကောင်းကောင်း မနေပဲ အစွန်းရောက် လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ နံမည် ကတော့ ပျက်သထက် ပျက်မှာပဲ။ ဒါဘယ် ဘာသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့လေ။ ခရစ်ယာန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိန္ဒူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစ္စလာမ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တာက အစွန်း ရောက်တယ် ဆိုရင် မကောင်းဘူး။”
ဒီသတင်း ဆောင်းပါးပါ အချက် အလက် တွေကြောင့် နိုင်ငံတွင်း နှစ်ပေါင်း များစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် လာကြတဲ့ ဘာသာ မတူသူ တွေကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုတွေကို ဆက်မဖြစ်စေချင် တော့ဘူး လို့လည်း မန္တလေး ဒေသခံ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုလှိုင်ဘွားက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအကြမ်းဖက် မှုတွေကို ဖန်တီး ပေးနေသူ တွေကိုလည်း လုပ်ရပ် တွေကို ရပ်တန်း ကရပ်ဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ ချင်ပါတယ် လို့သူက ပြောပါတယ်။
“ဒီမှာ မိထ္ထီလာမှာ ဖြစ်တယ်။ လားရှိုးမှာ ဖြစ်တယ်။ ဥက္ကံမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာက မပြေးသော် ကန်ရာ ရှိပေါ့ ဗျာ။ နောက်သူတို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေး တွေလည်း ရှိတာ ပါပဲ။ အဓိက ကတော့ ရောင်တော် ပြန် လွှတ်ပြီး အစိုးရက ဖန်တီး ပေးနေတယ် လို့လည်း ယူဆ လို့ရ ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်း တွေက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း တွေလို့ ကျနော် ကတော့ မယုံကြည် ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူပြောတာ လေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင် ပြီးတော့ နောက်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်း လေးတွေ ရှိတာ ပေါ့လေ။ အဲ့ တာ မျိုးလေး တွေဖြစ် လာတော့ အသုံးချ ခံနေရ တာလည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပေါ့။ မဖြစ်စေ ချင် ဘူး ပေါ့ ဗျာ။ ပြည်တွင်း မှာနေတာ မွတ်စလင် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးက ဒီနိုင်ငံ သား တွေချည်း ပါပဲ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီဟာကို စီမံကိန်း ချပြီး လုပ်နေတယ် ဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ဆက်ပြီးတော့ မလုပ်သင့် တော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အားလုံးက အတူမွေး၊ အတူကြီး ပြင် ပြီးတော့ အတူ လက်တွဲ ပြီးတော့ လုပ်ခဲ့ ကြတဲ့ သူတွေ ချည်းပါပဲ။”
ဘာသာ မတူ၊ လူမျိုး မတူသူတွေ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် လာခဲ့တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်းမှာ ပဋိပက္ခ တွေ မဖြစ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေနိုင်ရေးနဲ့ မတူညီမှု တွေအပေါ် ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု တွေကို လက်မ ခံ နိုင်ဘူး လို့လည်း ဗမာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ကိုကျော်ကိုကို ကပြော ပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သမဂ္ဂရဲ့ မူက ငြိမ်းချမ်းရေးကို သွားတာဗျ။ ဘာသာ မတူ၊ လူမျိုး မတူတွေ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် ကြတဲ့ အခြေ အနေမှာ တဖက်နဲ့ တဖက် ပဋိပက္ခ ဖြစ်မှာကို ကျနော်တို့ မလိုလား ဘူး။ တဖက်နဲ့ တဖက်ကို အုပ်စု ဖွဲ့ပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် တာကို ကျနော်တို့ လုံးဝ မလိုလားဘူး။ အဲ့သလို အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက် မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူပဲ ရှိနေ ရှိနေ ဒီဟာကို ကျနော် တို့လုံးဝ ဆန့် ကျင် ရမယ်။ ဒါကို လုံးဝ ကန့်ကွက် ရမယ်၊ ရှုံ့ချ ရမယ်။ကျနော် တို့က ပြဿနာ ဖန်တီး မှုတွေကို လုံးဝ လက်မခံ ပဲနဲ့၊ ကျောင်းသားထု အချင်းချင်း ပြည်သူ လူထု အချင်း ချင်းရော၊ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တဲ့ အလေ့ အထ ရတဲ့ အထိကို ကျနော် တို့က ကြိုးစား ပြီးတော့ ကျနော် တို့က စည်း ရုံး ရမှာပဲ။
Time `မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး မှာပါတဲ့ မြန်မာ သံဃာတော် တပါး ဖြစ်တဲ့ အရှင် ဝီရသူရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဖော်ပြပြီး အကြမ်းဖက်မှု ကိုလိုလားသူ နဲ့အဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေ အပေါ် သတင်း ခေါင်း စီးပေး ရေးသား ဖော်ပြချက် အပေါ် နိုင်ငံရေး သမား ကျောင်းသား လူငယ် တွေနဲ့ လူမှုရေး လှုပ်ရှား သူတွေရဲ့ အမြင် တချို့ကို စုစည်း တင်ပြခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။
This entry was posted on June 23, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်မှ သွေဖယ်ခြင်း	ပညာရေးဌာနတွင်ဘာသာခြားအားရှစ်ခိုးခိုင်းခြင်း မရှိဘဲ နမ္မတူး အမက(၃)၊ ကျောင်းအုပ်က အဓမ္မ ရှစ်ခိုး ခိုင်းခြင်း အပေါ် ပြသနာ တက် →